Ọzụzụ nchịkwa iwe maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị ọbịa na Antalya | RayHaber
HomeGeneralỌzụzụ nchịkwa iwe maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị ọbịa na Antalya
sofor na ndị nlekọta nọ na anke
Nchịkwa iwe na izi ezi nkwukọrịta maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na Antalya; Antalya Obodo ukwu na-aga n'ihu na-azụ ndị ọrụ ya. Ngalaba nke Ọrụ Ndị Ọrụ na-enye ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị nnabata ndị na-eje ozi ndị mmadụ n'otu n'otu njikwa iwe na izi ezi nkwukọrịta.
Antalya Nnukwu Obodo Bülent Ecevit Cultural Center n'ime ogo nke enwere na agụmakwụkwọ pụrụ iche na ndị ọrụ nwere nkwarụ iji melite omume ụmụ amaala banyere okwu a tụlere. Ọzụzụ nke pụrụ iche mmụta na mmepe ọkachamara, Autism Research na Practice Association onyeisi oche Ugur Rock, echiche na-atụ aro nke ọkà n'akparamàgwà mmadụ Ịhụnanya Ulutaş na Turkey Disabled Association Antalya Branch President Mehmet Karavural jikọta.
KỌMỌR C CORRECT
The onwe ọzụzụ na mmepe ọkachamara Ugur Kaya isi ike chere ihu otú ihe omume ahụ malitere na ọzụzụ metụtara ọ kwesịrị onye na-akwọ nke ndị ọrụ àgwà ndị mmadụ nwere nkwarụ na ndị isi ike ihu nke ndị na-nkwarụ Turkey Disabled Association Antalya Branch President dabeere na echiche Mehmet Karavural si. Mgbe ahụ Ọkachamara Ọkachamara Sevgi Ulutaş nyere ọzụzụ banyere njikwa iwe na usoro nkwukọrịta maka ndị ọrụ n'ọhịa. Na ngwụsị nke usoro ọzụzụ ahụ, enyere ndị ọrụ ahụ na-esonye na asambodo ịga n'ihu.
Ọzụzụ Ndị Ọkwọ ụgbọ ala na Ọha na Adana oche…
Ọzụzụ ụgbọ okporo ígwè site n'aka Denizli Metropolitan na Minibus Drivers
Denizli Transportation Inc. Ọzụzụ ụgbọ okporo ígwè maka ụgbọ ala
Ọkụ ọkụ na-enye ndị ọrụ ụgbọ ala na Trabzon
Antalya Ụgbọ njem Inc. Enyemaka Enyemaka Mbụ maka Ndị Ọkwọ ụgbọala
Ọzụzụ ịchịkwa Iwe